तरुण दलको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीलाई पेस्तोल ताकेर लखेट्ने सशस्त्रका हवल्दार को हुन् ? (भिडियोसहित) — Imandarmedia.com
तरुण दलको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीलाई पेस्तोल ताकेर लखेट्ने सशस्त्रका हवल्दार को हुन् ? (भिडियोसहित)
शनिबार नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल तरुण दलले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा नयाँ बानेश्वर रणमैदान बन्यो । तरुण दल र प्रहरीबीचको झडपले २०६२–६३ को आन्दोलनको झझल्को दिएको थियो ।
प्रहरीले भीड हटाउन अश्रुग्यास र जथाभावी लाठीचार्ज गर्दा तरुण दलका सयौं कार्यकर्ता घाइते भएको दलका उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईको भनाइ छ ।
प्रदर्शनमा तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र यादव, कांग्रेस ललितपुरका सभापति मदन अमात्यलगायत गम्भीर घाइते भएका छन् । धेरै तरुण नेता कार्यकर्ताको अहिले विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
तरुण दलको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा एक सशस्त्र प्रहरी हातमा पेस्तोल निकाल्दै आन्दोलनकारीलाई लखेट्न सडकमा निस्के । उनले समाचार संकलन र तस्बिर खिच्ने गएका केही पत्रकारलाई पेस्तोलसमेत ताके ।
आन्दोलनकारीलाई पेस्तोल ताक्दै लखेटे । उनी सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रहेको पुष्टि भएको छ । उनी प्रदेश नम्बर ७ का समाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीका अंगरक्षक भएको खुलेको छ ।
उनी शुक्रबार राति मात्र काठमाडौं आइपुगेका थिए । दलका भ्रातृसंगठनको आन्दोलनमा पेस्तोल निकाल्दै ताक्दा गोली चलेको भए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्दै अहिले चौतर्फी उनको आलोचना भइरहेको छ ।
२०७५ साउन ६ गते प्रकाशित